ကံဆိုးသောပွဲများရာသီပွဲစဉ် ၃ သည်ဇန်န ၀ ါရီလတွင် Netflix တွင်ပြသမည် - Netflix မူရင်း
ကံဆိုးသောပွဲများရာသီပွဲစဉ် ၃ သည်ဇန်န ၀ ါရီလတွင် Netflix တွင်ပြသမည်
မမျှော်လင့်သောအဖြစ်အပျက်များဆက်တိုက် - Credit: Netflix
Netflix ကအော်စကာအကောင်းဆုံးရုပ်ပုံအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးအတွက်နောက်တွဲယာဉ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် ခရီးသွားရာသီ3သည်ဒီဇင်ဘာလတွင် Netflix သို့ရောက်ရှိလာသည်
ကံဆိုးသောဖြစ်ရပ်များရာသီ3ကြိမ်မြောက်စီးရီးသည်နှစ်သစ်ကူးနေ့ (၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်) တွင် Netflix တွင်ပြသသည်။ စီးရီး၏နောက်ဆုံးရာသီကိုသင်၏နှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြည့်ပါစေ!
Netflix ကထွက်ရှိမည့်နေ့ကိုကြေငြာခဲ့သည် ကံဆိုးပွဲများတစ်စီးရီး ရာသီ ၃။ Netflix ၏မူလစီးရီး၏နောက်ဆုံးရာသီသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက်စော။ ပြသခြင်းဖြစ်သည်။
ကံဆိုးပွဲများတစ်စီးရီး ရာသီ3ဇန်နဝါရီလ 1, 2019 ရက်တွင် Netflix အပေါ် Premieres! သင့်တွင်နှစ်သစ်ကူးအစီအစဉ်အတွက်အစီအစဉ်များ မရှိ၍ စိတ်ပျက်စရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်သင်၏နှစ်ကိုစတင်လိုပါကနှစ်သစ်ကူးနေ့သစ်ရာသီ၏အဖြစ်အပျက်ခုနစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရှုသင့်သည်။
Netflix သည်ရာသီသစ်အတွက်တိုတိုတိုတိုတိုတိုမျှဝေခဲ့သည့်အတွက်ထိုဗီဒီယိုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ဒါဟာဇာတ်ကြောင်းပြော Lemony Snicket (ပက်ထရစ် Warburton) နှင့်လူတိုင်းအကြိုက်ဆုံး Count, Olaf Count (Neil Patrick Harris) ။
ဆက်စပ်ပုံပြင်:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်အသစ် ၂၅ ကား
လျောက်ပတ်စွာရာသီသစ်အတွက် Netflix ၏ tagline ကျနော်တို့နောက်ဆုံးအဆိုးဆုံးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သူရဲကောင်းများဖြစ်သည့် Violet, Klaus နှင့် Sunny Baudelaire အတွက်ကောင်းသောလက္ခဏာမဟုတ်ပါ။ သိသာထင်ရှားတဲ့, ဒီ၏နောက်ဆုံးရာသီဖြစ်ပါတယ် ကံမကောင်းစွာဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီး, သော Snicket ကရေးသားတူညီသောနာမတျော၏စာအုပ်စီးရီးအောက်ပါအတိုင်း။
အဆိုပါ Penultimate အန္တရာယ်
ပထမရာသီနှစ်ခုကဲ့သို့ပင်စာအုပ်များကိုနှစ်နာရီကြာအပိုင်းအစများအဖြစ်ခွဲထားသည်။ ပေမယ့်, ဒီရာသီနှင့်အတူကှဲလှဲနည်းနည်းရှိပါတယ်။ ဒီရာသီသာဖြစ်စဉ်များခုနစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်တူသောပုံရသည်
သူမရဲ့အခန်းကဏ္ for အတွက်လူသိများတဲ့ Allison Williams မိန်းကလေးများ နှင့် ထွက်သွားပါ, Kit Snicket တွင်တတိယရာသီအတွက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူသည် Baudelaires များကိုသူတို့၏ဆိုးရွားသောဆွေမျိုး၊ Count နှင့် Baudelaire ၏ကံကြမ္မာကိုခိုးယူရန်ဘာမျှမရပ်တန့်မည့်သူ၏ minions များထံမှကယ်တင်ရန်အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားပါလိမ့်မည်။
ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပိုမိုသိစေရန်သေချာပါလိမ့်မယ် ကံဆိုးပွဲများတစ်စီးရီး ရာသီ3နှင့်ကျွန်တော်တစ်နှစ်ရဲ့အဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးရာသီရဲ့ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲနီးကပ်လာအဖြစ်မည်သည့်နောက်တွဲယာဉ်သို့မဟုတ်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သင်နှင့်အတူမျှဝေပါ။
နောက်တစ်ခု:ပြည်နယ်တစ်ခုစီမှ Netflix ကြယ်ပွင့်
ကောင်းသောရာသီ၏ရာသီ2netflix အပေါ်ထွက်လာပါဘူး
အမေရိကန်ထိတ်လန့်စရာဇာတ်လမ်းရာသီ9Premiere date
ဘယ်အချိန်မှာ riverdale ရာသီ4netflix လာမယ့်နေသည်